fitraitraiky ny lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
fitraitraiky ny lalao
ny mahasoa dia afaka manao ny zava-drehetra ny fiainana. Raha mihevitra fa ny fahaiza-hitsambikina ambony na lavitra – ilaina asa, jereo ny deftly hitsambikina ho any an-hetsika filma mahery fo ny elanelana misy eo amin'ny tampon-trano ny ny trano ho latsaka any an-lasely soavaly, mitsambikina avy amin'ny varavarankely. Mahery fo ny sarimihetsika matetika Mamonjy Aina, nefa ny tsara indrindra scenarist – ny fiainantsika sy tsy fantatro hoe inona no tsy nampoizina dia manolotra. Noho izany, sokafy ny lalao an-tserasera sy manomboka milalao fitraitraiky, ny fifehezana ireo variants samihafa. Izany dia mety ho elon'aina mitsambikina, vaulting, mitsambikina. Hitsambikina ho any an-halavany sy haavony, manampy ny mahery fo ny hametraka ny firaketana an-tsoratra.
Kogama: Manangana ankizy ary mamelahy ny fianakavianao
Teen Titans Mandeha: Mitsangàna Andro Iray
Kiba sy Kumba: Jungle Chaos
Ny feso mampiseho 6
Kogama: D andro
Pichon: Ilay vorona masiaka
Kiba sy Kumba: Jungle Run
Hanketo sy kivy
Flappi vorona: Multiplayer
Lalao Fitraitraiky tamin'ny Category:
Farany fitraitraiky ny lalao
Mihazakazaha! Run Blue Imposter!
Waterpark: hazakazaka mihetsiketsika
Lalao Online Rehetra fitraitraiky ny lalao
-tserasera tselatra lalao Mason'ny tonga dia ankehitriny
Mitady ankizy sasany, dia toa efa nafenina ao loharano izay tsy mamela azy ireo hijanona na dia ho iray minitra. Ny lalao rehetra ireo finday, ary mifandray amin'ny nihazakazaka, fitraitraiky sy somersaults. Na dia na dia nanana ny tontolo virtoaly, dia mifidy ny lalao-mifandray vokatra miaraka amin'ny hafainganam-pandeha, ady, mihetsiketsika fifadian-kanina. Noho izany, ny lalao an-tserasera tselatra mitsambikina isika hanokana mavitrika tovovavy sy tovolahy izay antsoina hoe fidgets.
mitsambikina, manao fanatanjahan-tena
Anisan'ny ny fanatitra dia ho hitanao fialam-boly faritra ny drafitra sy mitsambikimbikina lalao fanatanjahan-tena amin'ny aterineto. Raha toa ianao ka honina eo amin'ny fanatanjahan-tena, dia mahazo ny lisitry ny fifaninanana amin'ny fitraitraiky:
Noho ny birao na milomano ao anaty rano
Ao amin'ny trampoline
amin'ny ski na Snowboard fitraitraiky
Noho ny elon'aina
mitaingin-tsoavaly noho ny vato misakana
Ao amin'ny avo fahenina d
Ny halavan'ny ny fiaingana toerana na ny F
Indraindray hitsambikina – izany no tena asa ny ny atleta, fa izy ireo miaraka amin'ny acrobatic somersaults sy ny fanampin-tsakafo hafa efitrano. Indrindra mamirapiratra izany no hita ao amin'ny cirque izay manorina piramida mpanakanto avy ao ny vatany, mitsambikina eo amin'ny trampoline teo an-tampon'ny velona rafitra na mampiseho fehezina Vaulting – mitsambikina avy amin'ny soavaly iray hafa mandritra ny Miezaha ary.
Ary ataonao amin'ny kilasy fanaovana fanatanjahan-tena manao izay Mampisambotra fitsipika mitsambikina mihoatra ny soavaly, mitovy trano fisotroana, ny halavany na ny ambony, tady. Ary raha manao izany ianao dia mbola tsy ampy, dia manomboka mitsambikina Flash lalao an-tserasera izay azonao atao izany mandrakizay.
Ny tena amim-paharisihana-saltatorial lalao sehatra
Fanatanjahantena mametraka lehibe dalana izay rehetra te-ho Olympian. Fa isika hanangona ny mbetika sy miala voly, ka samy vaovao ianao dia hahita lalao mahafinaritra sy ny fahafinaretana.
Nitaingina ny avana amin'ny kely pony, hanampy Tarzan mba hitsambikina eo amin'ny voaloboka, ary aza latsaka any an-valanoranon'ny ny voay ao amin'ny fotaka renirano mandeha sambo. Mahery fo matetika no mahita toe-javatra mampidi-doza ny tenany amin'ny fony ihany ny fahafahana hifady hanina sy hitsambikina ambony mba hamonjy azy ireo amin'ny sasany ny fahafatesana.
Hanketo eo amin'ny sehatra mba mianika any amin'ny ambaratonga ambony, ary mba haka artifact manan-danja izay mihatra amin'ny ho avy. Ary raha izany no lalao roa, mifandimby mandalo fanaraha-maso na ny toetra amam-panahy ho ary samy mitondra ny anjara ny asa nanirahana ny jumps mifandray.
dia hamangy eny amin'ny habakabaka, aiza no hifindra amin'ny fluffy Tuchka any amin'ny afobe, izay ny lelafo mirehitra voditongotra, fa tsy mba handoro, tsy maintsy nitsambikina ny hantsana, mba hifindra tany damask, lavitra malazo hafanana.
nitsena anareo sy Sonic izay manangona amin'ny ambaratonga samihafa ny kavim-bolamena mba hanampy azy indray hery. Izany koa mila mandresy ny toerana amin'ny spikes, ary fahari-isan-karazany Hanketo dia hanampy mamonjy aina.
Super Mario, indray mandeha tao amin'ny holatra Fanjakana, naprygivaet mpiady domohina Koopa, mba handringana azy. Toy izany koa fomba itondrany an'ireo lalitra agaric, izay mitombo ao mifono mistery sy maloka ity toerana, hanjaka ny lalana ihany ho an'ny malalany andriambavy.
tianao lalao amin'ny feso mitsambikina avy ao anaty rano mba manidina amin'ny hoop, namely ny baolina sy manao somersault eny amin'ny rivotra. Fa piranhas mamela ny tontolo manodidina mba hisambotra haza, ary ny hilatsaka ka hatrany ambany. Mba namitaka ny fahombiazana, manampy azy mba nitsambikina ambony kokoa.
Ny ampahany lehibe ny kaonty ho an'ny lalao saltatorial platformer izay ny endri-tsoratra dia mandroso raha mifindra eo amin'ny sehatra mihetsiketsika. Fa tsy maninona izay fomba tiany ny hitsambikina, fa be dia be mandrakariva fifaliana sy fahafinaretana amin'izao Mason'ny, vonona ny handresy ny avo sy ny lavitra ao ny fomban 'Tiger angano ny Winnie ny Pooh.